ငါတို့သညျ ကွီးကယျြမွငျ့မွတျသူမြား ဖွဈတျောမူကွကုနျ၏ – Kyaw Zaw Oo's Blog
April 4, 2019 April 5, 2019 kyaw zaw oo
ငါတို့သညျ ကွီးကယျြမွငျ့မွတျသူမြား ဖွဈတျောမူကွကုနျ၏
ငါတို့သည် ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူများ ဖြစ်တော်မူကြကုန်၏
( – – – on “class protection” – – – )
ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ကျေးလက်ပိုင်းက ပွဲသဘင်ဖြစ်ပုံရတဲ့ အခင်းအကျင်းတစ်ခုမှာ လူဝင်ကတဲ့ ကျွဲရုပ်နှစ်ရုပ်မှာ “၀န်ကြီး” ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ “အမတ်” ဆိုတဲ့ စကားလုံး နှစ်လုံးကို ရေးထိုးပြီး သရုပ်ဖော်မှု လုပ်ကြတာကြောင့် အမတ်တွေ၊ ၀န်ကြီးတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိပါးတယ်လို့ ယူဆတဲ့အတွက် ဥပဒေအတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ ညွှန်ကြားစာတစ်စောင်ကို အခုနက ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ဖတ်မိတော့ ကျွန်တော် ပြုံးမိပါတယ်။
တရားစွဲဘာစွဲနဲ့ ဒီကိစ္စကိုသာ ဆက်လုပ်နေကြမယ် ဆိုရင်လည်း လူပေါင်းများစွာရဲ့ ပြုံးခြင်းကို နေ့စဉ်ရက်ဆက် ခံကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထောင်ကျအချုပ်ကျတဲ့လူတွေကို ပြုံးတာမဟုတ်ဘူး၊ တရားစွဲတဲ့လူတွေကို ပြုံးကြမှာ . . . ။
ငါတို့အစုအဖွဲ့ဟာ တစ်ခြားလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးထက် ပိုလို့ မြင့်မြတ်တယ် ဆိုတဲ့ တွေးခေါ်မြော်မြင်မှု ရှုထောင့်ကနေ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို လှမ်းကြည့်နေတဲ့ လူတွေဟာ မြန်မာ့လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ ရခိုင့်လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ မရေအတွက်နိုင်အောင် ရှိကြပါတယ်။ ဥပမာတွေ အများကြီးပါ။
(က) တောင်ပို့ဟာ ဖွတ်ထွက်သွားတာကို မျက်စိနဲ့ မြင်နေရရင်တောင်မှ ဆက်ကိုးကွယ်ရမယ်လို့ နဘားသရား ပြောနေကြတဲ့ နီပေါတွေ . . .
(ခ) ခင်ဗျားတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးအယူအဆကို တချက်လောက်ပြောပြပါ လို့ ပြောရင် “အမေစုကို ကျွန်တော် ယုံတယ်ဗျာ” ဆိုတဲ့စကားကို နှစ်ပေါင်း ဆယ်နှစ်လောက် မပြောင်းမလဲပြောတဲ့သူတွေ၊ ဟုတ်ပြီ အမေစုကိုယုံတာဟာ နိုင်ငံရေးအယူအဆမဟုတ်သေးဘူး ခင်ဗျားတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး အယူအဆကို ပြောပါ ဆိုရင်လည်းပဲ နားမလည် နိုင်တဲ့ အယောင်ဆောင် ပန်းပုဆရာတွေ . . .
(ဂ) အချုပ်အချာအာဏာဆိုတာ ပြည်နယ်တွေဆီမှာ ခွဲဝေသက်ရောက်လျက်ရှိနေတဲ့ အကြောင်း ရယ်၊ အချုပ်အချာအာဏာကို ကာကွယ်တာ နဲ့ လူများစုလူမျိုးကြီးရဲ့ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးရေးဝါဒ (hegemony)တို့ မတူဘူး ဆိုတာရယ် တို့ သဘောမပေါက်တဲ့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းကြီးနဲ့တကွ ဆက်စပ် အသိုင်းအ၀ိုင်းရယ် . . .
(ဃ) ငါ့ဆရာတွေက လွဲရင် ကျန်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ ငါတို့ဆဲရမယ့်သူတွေပဲ ဆိုတဲ့ သင်ကြားချက်ကို တသွေမတိမ်း လိုက်နာကျင့်သုံးကျတဲ့ တပ်နီလူငယ်တွေ . . .
(င) (issue ပေါင်းစုံကို စဉ်းစားရတဲ့ နိုင်ငံရေးသမား နဲ့ issue တစ်ခုချင်းကို လုပ်ဆောင်ကြတဲ့ activist တို့ဟာ အမျိုးအစားမတူဘူး၊ ပရဟိတလုပ်သူ နဲ့ နိုင်ငံရေးရာကို တွေးခေါ်မြော်မြင် လုပ်ကိုင်သူတို့ရဲ့ အလုပ် သဘာဝ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုတို့ မတူဘူး၊ ‘၀ိုင်းရံသူ’ ဆိုတာလည်းပဲ နိုင်ငံရေးကိုနားလည်းချင်မှ နားလည်မှာ ဖြစ်တဲ့ supporter လောက်ပဲ အဓိပ္ပါယ်ရတယ်လို့ မသိပါပဲလျက်) ကြီးကြီးမားမား နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ယောက် (ဥပမာ ‘စု’) ကို ၀ိုင်းရံရင် အမတ်ဖြစ်မှာပဲ သို့မဟုတ် အမတ်နေရာကို ဆက်ပြီးယူထားနိုင်မှာပဲ လို့ အားတက်သရောဖြစ်လျက် “မ၀န်းရံသူ ဒို့ရန်သူ” လို့ ကြွေးကြော်နေကြတဲ့ ၀ိုင်းရံသူ ဆိုသူတွေ . . .
(စ) ဒေသအတွက် လူမျိုးအတွက် အခြားနေရာတွေမှာ ဘယ်လောက်ပဲ အနစ်နာခံလုပ်ပေးနေ လုပ်ပေးနေ ငါတို့ဂရုမစိုက်ဘူး ငါတို့အဖွဲ့လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကို ၀င်မကူရင် (ငါတို့ကို အနှောင့်အယှက်ပေးသည်ဖြစ်စေ မပေးသည်ဖြစ်စေ) အဲသည်လူဟာ သစ္စာဖောက်ပဲ လို့ ပြောပြောတတ်တဲ့ အောက်ခြေအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်တွေ . . .
(ဆ) အာဏာကိုလက်ကိုင်ထားတဲ့ သို့တည်းမဟုတ် အာဏာနဲ့နီးတဲ့လူတွေဟာ သီးခြားအလွှာ တစ်ခုဖြစ်တယ် အဲသည်လူတွေကို သာမာန်လူတွေက ပြုံးရွှင်ရုံလောက်ကယ်မျှတောင် တို့ထိပုံဖော်ခြင်း မပြုလုပ်ရ လို့ ယူဆသူတွေ . . . .
သူတို့ဟာ အုပ်စုတူချင်မှ တူမယ်၊ ဘက်တူချင်မှ တူမယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ခွဲခြမ်းယူဆတုန့်ပြန်တဲ့ နည်းလမ်းမှာတော့ စိတ်နေသဘောထားအားဖြင့် တူကြပါတယ်။ “ဒါက ငါတို့အုပ်စုလေ၊ ကျန်တာတွေကတော့ ဖွတ်ချီးပဲ” လို့ ဆိုတဲ့ အခံကို ရင်ထဲ အသည်းထဲမှာ အခြေခံတည်ဆောက်ထားကြတဲ့ သူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနေရာမှာ သူတို့ဟာ သဘောသဘာဝချင်းတူပါတယ်။ “တပ်မတော်ကို စိတ်နဲ့တောင် မပြစ်မှားနဲ့” ဆိုတဲ့စကားနဲ့ အသွင်တူ အမျိုးအစားတူစကားတွေဟာ ဒီလိုလူတွေ ဆီကနေ စီးထွက်လာပြီး လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲကို စိမ့်ဝင်ပါတယ်။
“ကြီးကျယ်ခြင်း” မှာ လက္ခဏာများစွာ အရင်းခံအကြောင်းများစွာ ရှိပေမယ့် ကြီးကျယ်သူတွေမှာ ပြင်ပအကြောင်းအချက်တွေက ချိုးဖျက်ဖို့ မလွယ်တဲ့ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ခြင်းကတော့ မလွဲမသွေ ရှိတတ်ကြတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲသည် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုကို ဥပဒေနဲ့ အကာအကွယ်ပေးပြီး တည်ဆောက်ထားတာ မဟုတ်ဘူး။
ရမ်းဗြဲမြို့နယ်မှာ တရားစွဲအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စကိုတော့ ဥပဒေပိုင်းအရ ဘာမှ မဆွေးနွေးလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပြုံးမိတယ်။ သံချပ်ထိုး မခံနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားဟာ ရှက်စရာပါ။ ဒါကို မြင်းထိန်းငတာတွေက သိချင်မှ သိမှာပါ။ ကလေးတွေ ပျော်ကြပါစေ၊ ကိုငြိမ်းမောင် လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
၂၀၁၉ ဧပြီလ (၄) ရက်
ရမျးဗွဲမွို့နယျ ကြေးလကျပိုငျးက ပှဲသဘငျဖွဈပုံရတဲ့ အခငျးအကငျြးတဈခုမှာ လူဝငျကတဲ့ ကြှဲရုပျနှဈရုပျမှာ “ဝနျကွီး” ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ “အမတျ” ဆိုတဲ့ စကားလုံး နှဈလုံးကို ရေးထိုးပွီး သရုပျဖျောမှု လုပျကွတာကွောငျ့ အမတျတှေ၊ ဝနျကွီးတှရေဲ့ ဂုဏျသိက်ခာကို ထိပါးတယျလို့ ယူဆတဲ့အတှကျ ဥပဒအေတိုငျး အရေးယူဆောငျရှကျဖို့ ညှနျကွားစာတဈစောငျကို အခုနက ဖစျေ့ဘုတျမှာ ဖတျမိတော့ ကြှနျတျော ပွုံးမိပါတယျ။
တရားစှဲဘာစှဲနဲ့ ဒီကိစ်စကိုသာ ဆကျလုပျနကွေမယျ ဆိုရငျလညျး လူပေါငျးမြားစှာရဲ့ ပွုံးခွငျးကို နစေ့ဉျရကျဆကျ ခံကွရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ထောငျကအြခြုပျကတြဲ့လူတှကေို ပွုံးတာမဟုတျဘူး၊ တရားစှဲတဲ့လူတှကေို ပွုံးကွမှာ . . . ။
ငါတို့အစုအဖှဲ့ဟာ တဈခွားလူ့အဖှဲ့အစညျးတဈခုလုံးထကျ ပိုလို့ မွငျ့မွတျတယျ ဆိုတဲ့ တှေးချေါမွျောမွငျမှု ရှုထောငျ့ကနေ ကမ်ဘာကွီးတဈခုလုံးကို လှမျးကွညျ့နတေဲ့ လူတှဟော မွနျမာ့လူ့အသိုငျးအဝိုငျးနဲ့ ရခိုငျ့လူ့အသိုငျးအဝိုငျးမှာ မရအေတှကျနိုငျအောငျ ရှိကွပါတယျ။ ဥပမာတှေ အမြားကွီးပါ။
(က) တောငျပို့ဟာ ဖှတျထှကျသှားတာကို မကျြစိနဲ့ မွငျနရေရငျတောငျမှ ဆကျကိုးကှယျရမယျလို့ နဘားသရား ပွောနကွေတဲ့ နီပေါတှေ . . .
(ခ) ခငျဗြားတို့ရဲ့ နိုငျငံရေးအယူအဆကို တခကျြလောကျပွောပွပါ လို့ ပွောရငျ “အမစေုကို ကြှနျတျော ယုံတယျဗြာ” ဆိုတဲ့စကားကို နှဈပေါငျး ဆယျနှဈလောကျ မပွောငျးမလဲပွောတဲ့သူတှေ၊ ဟုတျပွီ အမစေုကိုယုံတာဟာ နိုငျငံရေးအယူအဆမဟုတျသေးဘူး ခငျဗြားတို့ရဲ့ နိုငျငံရေး အယူအဆကို ပွောပါ ဆိုရငျလညျးပဲ နားမလညျ နိုငျတဲ့ အယောငျဆောငျ ပနျးပုဆရာတှေ . . .
(ဂ) အခြုပျအခြာအာဏာဆိုတာ ပွညျနယျတှဆေီမှာ ခှဲဝသေကျရောကျလကျြရှိနတေဲ့ အကွောငျး ရယျ၊ အခြုပျအခြာအာဏာကို ကာကှယျတာ နဲ့ လူမြားစုလူမြိုးကွီးရဲ့ ဗိုလျကစြိုးမိုးရေးဝါဒ (hegemony)တို့ မတူဘူး ဆိုတာရယျ တို့ သဘောမပေါကျတဲ့ လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျးကွီးနဲ့တကှ ဆကျစပျ အသိုငျးအဝိုငျးရယျ . . .
(ဃ) ငါ့ဆရာတှကေ လှဲရငျ ကနျြတဲ့ နိုငျငံရေးသမားတှဟော ငါတို့ဆဲရမယျ့သူတှပေဲ ဆိုတဲ့ သငျကွားခကျြကို တသှမေတိမျး လိုကျနာကငျြ့သုံးကတြဲ့ တပျနီလူငယျတှေ . . .
(င) (issue ပေါငျးစုံကို စဉျးစားရတဲ့ နိုငျငံရေးသမား နဲ့ issue တဈခုခငျြးကို လုပျဆောငျကွတဲ့ activist တို့ဟာ အမြိုးအစားမတူဘူး၊ ပရဟိတလုပျသူ နဲ့ နိုငျငံရေးရာကို တှေးချေါမွျောမွငျ လုပျကိုငျသူတို့ရဲ့ အလုပျ သဘာဝ၊ အကြိုးသကျရောကျမှုတို့ မတူဘူး၊ ‘၀ိုငျးရံသူ’ ဆိုတာလညျးပဲ နိုငျငံရေးကိုနားလညျးခငျြမှ နားလညျမှာ ဖွဈတဲ့ supporter လောကျပဲ အဓိပ်ပါယျရတယျလို့ မသိပါပဲလကျြ) ကွီးကွီးမားမား နိုငျငံရေးသမားတဈယောကျယောကျ (ဥပမာ ‘စု’) ကို ၀ိုငျးရံရငျ အမတျဖွဈမှာပဲ သို့မဟုတျ အမတျနရောကို ဆကျပွီးယူထားနိုငျမှာပဲ လို့ အားတကျသရောဖွဈလကျြ “မဝနျးရံသူ ဒို့ရနျသူ” လို့ ကွှေးကွျောနကွေတဲ့ ၀ိုငျးရံသူ ဆိုသူတှေ . . .
(စ) ဒသေအတှကျ လူမြိုးအတှကျ အခွားနရောတှမှော ဘယျလောကျပဲ အနဈနာခံလုပျပေးနေ လုပျပေးနေ ငါတို့ဂရုမစိုကျဘူး ငါတို့အဖှဲ့လုပျနတေဲ့ အလုပျကို ဝငျမကူရငျ (ငါတို့ကို အနှောငျ့အယှကျပေးသညျဖွဈစေ မပေးသညျဖွဈစေ) အဲသညျလူဟာ သစ်စာဖောကျပဲ လို့ ပွောပွောတတျတဲ့ အောကျခွအေဆငျ့ အဖှဲ့အစညျးဝငျတှေ . . .
(ဆ) အာဏာကိုလကျကိုငျထားတဲ့ သို့တညျးမဟုတျ အာဏာနဲ့နီးတဲ့လူတှဟော သီးခွားအလှာ တဈခုဖွဈတယျ အဲသညျလူတှကေို သာမာနျလူတှကေ ပွုံးရှငျရုံလောကျကယျမြှတောငျ တို့ထိပုံဖျောခွငျး မပွုလုပျရ လို့ ယူဆသူတှေ . . . .
သူတို့ဟာ အုပျစုတူခငျြမှ တူမယျ၊ ဘကျတူခငျြမှ တူမယျ၊ ဒါပမေဲ့ ကမ်ဘာကွီးကို ခှဲခွမျးယူဆတုနျ့ပွနျတဲ့ နညျးလမျးမှာတော့ စိတျနသေဘောထားအားဖွငျ့ တူကွပါတယျ။ “ဒါက ငါတို့အုပျစုလေ၊ ကနျြတာတှကေတော့ ဖှတျခြီးပဲ” လို့ ဆိုတဲ့ အခံကို ရငျထဲ အသညျးထဲမှာ အခွခေံတညျဆောကျထားကွတဲ့ သူတှေ ဖွဈကွပါတယျ။ ဒီလိုနရောမှာ သူတို့ဟာ သဘောသဘာဝခငျြးတူပါတယျ။ “တပျမတျောကို စိတျနဲ့တောငျ မပွဈမှားနဲ့” ဆိုတဲ့စကားနဲ့ အသှငျတူ အမြိုးအစားတူစကားတှဟော ဒီလိုလူတှေ ဆီကနေ စီးထှကျလာပွီး လူ့အဖှဲ့အစညျးထဲကို စိမျ့ဝငျပါတယျ။
“ကွီးကယျြခွငျး” မှာ လက်ခဏာမြားစှာ အရငျးခံအကွောငျးမြားစှာ ရှိပမေယျ့ ကွီးကယျြသူတှမှော ပွငျပအကွောငျးအခကျြတှကေ ခြိုးဖကျြဖို့ မလှယျတဲ့ မိမိကိုယျကို ယုံကွညျခွငျးကတော့ မလှဲမသှေ ရှိတတျကွတယျ လို့ ဆိုပါတယျ။ အဲသညျ မိမိကိုယျကို ယုံကွညျမှုကို ဥပဒနေဲ့ အကာအကှယျပေးပွီး တညျဆောကျထားတာ မဟုတျဘူး။
ရမျးဗွဲမွို့နယျမှာ တရားစှဲအရေးယူမယျဆိုတဲ့ ကိစ်စကိုတော့ ဥပဒပေိုငျးအရ ဘာမှ မဆှေးနှေးလိုပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ပွုံးမိတယျ။ သံခပျြထိုး မခံနိုငျတဲ့ နိုငျငံရေးသမားဟာ ရှကျစရာပါ။ ဒါကို မွငျးထိနျးငတာတှကေ သိခငျြမှ သိမှာပါ။ ကလေးတှေ ပြျောကွပါစေ၊ ကိုငွိမျးမောငျ လို့ပဲ ပွောခငျြပါတယျ။
၂၀၁၉ ဧပွီလ (၄) ရကျ
Previous ရကျစကျသော ရာဇာ
Next ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ ဦးနှောကျ နဲ့ နှလုံးသား